Nin faransiis Ah oo Sadex Jeer Wajigiisa Bedelay, Qaliino Lagu sameeyay sanado Is Xiga | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Nin faransiis Ah oo Sadex Jeer Wajigiisa Bedelay, Qaliino Lagu sameeyay sanado...
Nin faransiis Ah oo Sadex Jeer Wajigiisa Bedelay, Qaliino Lagu sameeyay sanado Is Xiga
Qofkii ugu horreeyey dunida ee wajiga laga beddelo laba goor ayaa sheegay in uu fiican yahay, seddex bilood ka dib markii lagu sameeyey qalliin taariikhi ah.
Jérôme Hamon ayaa qalliinkii ugu horreeyey looga beddelay wajiga sannadkii hore, ka dib markii uu jirku diiday dawooyin antibiotic oo la siiyey mar uu hargab ku dhacay.
Ninkaas 43 jirka ah ayaa ku jiray isbitaal ku yaalla Paris muddo laba bilood ah isagoo weji la’aan ah, ayadoo mudadaas la baadi goobayey qof waji ku deeqa.
Wuxuu yiri “wajigii ugu horreeyey isla markiiba waan ogolaaday. Xilliganna waa la mid”.
Mr Hamon waxaa dhibaato ku haya nooca 1aad ee xanuunka la yiraahdo neurofibromatosis oo ah xaalad la iska dhaxlo, taasoo sababtay in buro muuqaakiisa beddeshay ay wajigiisa ka soo baxdo.
Markii ugu horraysay ee wajiga laga beddelay waxay ahayd 2010, waana lagu guulaystay, laakinse hargab caadi ah ayaa ku dhacay 2015, ka dibna waxaa la siiyey antibiotic.
Waxaa is diiday daawadaas iyo xaalad laga daweynayey oo ahayd in jirku diido waxyaabaha qalaad ee dibadda lagaga keenay.
Astaantii ugu horraysay ee diidmada ah ayaa la arkay 2016 iyo bishii Nofembar ee aan soo dhaafnay. Wajiga oo qarka u saarnaa in unugyadiisu dhintaan ayaa laga saaray.
Mr Hamon wuxuu isagoo weji la’aan ah ku jiray qol ku yaalla isbitaalka Georges-Pompidou ee magaalada Paris, awoodna uma lahayn inuu wax arko, hadlo, ama wax maqlo ilaa bishii Janaayo markaasoo la helay qof waji ku deeqaya, markaas ayaana la sameeyey qalliinkii labaad ee waji beddelka.
Si looga baaqsado diidmo kale, Mr Hamon oo warbaahinta Faransiisku ugu yeereen “ninkii seddexda weji lahaa” ayaa lagu sameeyey daweyn gaar ah oo dhiigiisa lagu nadiifiyey, ka hor inta aan wejiga laga beddelin.
Wajigiisa cusub ayaa ah mid aan duuduubyo lahayn oo dhaqdhaqaaqna uusan ka muuqan, lafta madaxa, maqaarka iyo qaybaha kale ee wajiga ayaan weli toosin.
“Haddii aanan wajigan cusub aqbali lahayn dhibaato weyn ayaa dhici lahayd. Waxaa meesha ku jirta su’aal la xiriirta haybta (qofka aan ahay), laakin hadda waa na kan, xaaladdu way wanaagsan tahay, waa anigii” ayuu ku yiri wakaaladda AFP isagoo isbitaalka ku soo kabanaya.
“Waxaan ahay 43 jir, qofka wajiga ku deeqayna waa 22 jir, sidaa darteed waxaan hadda ahay 22 jir” ayuu ku yiri TV Faransiis ah.
Qalliinka oo saacado qaatay waxaa hogaaminayey Prof Laurent Lantieri, oo khabiir ku ah beddelidda wajiga iyo gacmaha, kaasoo sameeyey qalliinkii 1aad ee Mr Hamon.
“Maanta waxaan ogaannay in ay suurtogal tahay in laba goor qof wajiga laga beddeli karo. Ma aha arrin cilmi baaris ku sii jiraysa” ayuu ku yiri wargayska Le Parisien.
Qalliinkii ugu horreeyey ee weji beddelka ayaa laga sameeyey waqooyiga Faransiiska 2005.
Wixii markaa ka dambeeyey, 40 qalliin oo noocaas ah ayaa dunida laga sameeyey.
Previous articleDeg Deg, Xildhibaan Nac Nac, Waa In La Xidhaa Boqor Buur Madow hadii kale,
Next articleDeg Deg, Xildhibaan ka Dhawaajiyay in raysal wasaraha Soomaaliya oo Sheer ka Yahay Shirkadaha Xukuumada Somaliland ka Kiraysay kaydka Haamaha shidalka Berbera